Cheap ngwaahia carbon steel milling parts processing machinery parts factory na suppliers | Ouzhan
Carbon nchara bu iron-carbon alloy nke nwere carbon nke 0.0218% rue 2.11%. A na-akpọkwa ya carbon steel. Ohaneze, ọ na-enwe obere silicon, manganese, sọlfọ, na site. N'ozuzu, ihe dị elu nke carbon carbon, nke ka ukwuu na-esikwu ike ma nwekwuo ike, ma ọ bụ obere plasticity. Carbon ígwè CNC egwe ọka nwere a dịgasị iche iche nke ngwa na adabara ọtụtụ n'ibu akụkụ.
CNC lathes nwere ike hazie mgbagwoju adiana ahu shapes. Maka akụkụ igwe na-egwe ihe, a na-edozi oghere ahụ, a na-eji akwa igwe na-agba ọsọ ọsọ na-agagharị oghere na oghere iji belata ụdị na atụmatụ ndị achọrọ. Igwe ihe na-egwe nri na-adaba adaba maka ụdị ụdị ọrụ dịka akụkụ akụkụ na ngwaọrụ ndị na-agagharị agagharị. Curved akụkụ na n'ọtụtụ ebe, na ulo oru ubi, dị ka tobaim pupụtara, ụgbọ mmiri propellers, ulo oru ngwaahịa na cylindrical conical ebupụta, wdg Ouzhan na-ahaziri carbon ígwè-egwe ọka akụkụ machining ọrụ maka kpọrọ ahịa.
Uru nke Shanghai Ouzhan carbon steel milled akụkụ
- Unique ike
- Nnukwu mgbochi na-eyi
- Elu mgbochi corrosion arụmọrụ ma
- Ọ dịghị mfe nchara
- Ike ma sie ike
Ahaziri n'ibu carbon ígwè-egwe ọka akụkụ nhazi ngwa
Ihe onwunwe Igwe carbon dị ala, ọkara carbon nchara, elu carbon nchara, gbanwere nchara na-enweghị ihe ọ bụla, megharia ma degharịa phosphorus, na ndị na-abụghị sulfide dị elu nke manganese (ọdịnaya manganese karịa 1%)
Ọgwụgwọ ihu Enwere ike ịhazi elu nke carbon nchara dị ka ihe ị chọrọ, dị ka ọgbụgba ọkụ ọgbụgba, ikpo ọkụ, mmiri dị elu, na-atụtụ na ihe ndị ọzọ.
Main usoro Nga ọgwụgwọ → passivation (dị ka usoro ụkpụrụ) lus flushing (mmiri oyi ma ọ bụ mmiri ọkụ flushing) → neutralization → ihicha ọgwụgwọ
Njikwa mma Site na ngwunye gaa na nkwakọ ngwaahịa, usoro niile nke ịhazi igwe igwe na-achịkwa.
Ojiji Ejiri ya na ụlọ ọrụ dị arọ, ụlọ ọrụ ọkụ, ụlọ ọrụ dị mkpa kwa ụbọchị, mma ụlọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ
Nke gara aga: China emeputa CNC omenala carbon ígwè milled akụkụ
Osote: OEM carbon ígwè-egwe ọka ulo oru machining akụkụ
OEM anaghị agba nchara CNC machining akụkụ maka sta ...
OEM carbon ígwè-egwe ọka ulo oru machining p ...